‘पब्जी’ को स्थानमा अक्षयको ‘फौजी’ : सामाजिक सञ्जालमा उडाइदैछ मजाक | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २०, २०७७ chat_bubble_outline0
एक भारतीय कम्पनीले अभिनेता अक्षय कुमारसँग मिलेर ‘पब्जी’ जस्तै मोबाइल गेम बजारमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसको उद्देश्य भनेको भारतीय बजारमा पब्जीले बनाएको स्थान लिनु हो । चिनियाँ मोबाइल गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बित्तिकै यसको घोषणा गरिएको थियो ।
बैङ्लुरुस्थित एनकोर गेम्स नामक कम्पनीले यो गेम तयार गरेको हो र यसलाई पब्जीको प्रतिद्वन्द्वी भनिएको छ । कम्पनीले यस गेमलाई फौजी नाम दिएको छ र यो अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा बजारमा आउने भनिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार अक्षय कुमारले नै यस खेलको नाम जुराएका थिए । शुक्रबार अक्षयले ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तरगत यस खेललाई ल्याइएको जानकारी दिएका थिए ।
कम्पनीका सह संस्थापक विशाल गोंडलले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुराकानी गर्दै यस खेलको पूरा नाम ‘फियरलेस एन्ड युनाइटेड गार्डस्’ भएको जानकारी दिए । यस गेमा धेरै समयदेखि काम भइरहेको र यस खेलको पहिलो लेभल गलवान घाटीमा आधारित रहेको बताए ।
गलवान घाटीमा नै चीन र भारतका सैनिकबीच जुनमा पहिलोपटक हिंस्रक झडप भएको थियो । यसमा कम्तिमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए । त्यहाँ वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर दुई देशबीच तनाव जारी रहेको छ ।
यही गतिरोधका बीच भारत सरकारले लोकप्रिय गेमिङ एप पब्जीसहित चिनियाँ कम्पनीद्वारा बनाइएका ११८ अन्य मोबाइल एपमाथि बुधबार प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पब्जी अर्थात् प्लेयर अन्नोन्स ब्याटलग्राउन्डस् केही समयदेखि भारतमा लोकप्रिय रहेको थियो । विशेष गरेर युवामाझ लोकप्रिय यस खेलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यसको विरुद्ध तिखो प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
आलोचकका अनुसार फौजीको माध्यमबाट एनकोर गेम्स ‘राष्ट्रवाद’ को व्यापार गर्न खोजिरहेको छ । कम्पनीका सह संस्थापक विशाल गोंष्लले मोबाइल गेमबाट हुने कूल आम्दानीको २० प्रतिशत भारतीय सेनाका शहिद परिवारलाई दिने घोषणा गरेका छन् ।
आलोचनाका साथै सामाजिक सञ्जालमा यसको धेरै खिल्ली पनि उडाइदैछ । हेरौँ केही रोचक पोष्टहरुः
#FAUG exactly after
#PUBG banned 🤔
Atleast we can come up with
Original name PUB-G to FAU-G
Meanwhile Akshay Kumar - pic.twitter.com/OEprkDrzpn
— Vaishnavi (@V_Here_) September 4, 2020
— सागर सोनी 🚩🇮🇳 (@i_sagarsoni) September 4, 2020
— Akashvaani (@Akash_vaani__) September 4, 2020
I T U S
Iski Topi Uske Sar 😂#FAUG pic.twitter.com/7mltZ0Z7dh
— Himanshu Kale (@HimanshuKale_HK) September 4, 2020
Fau_G made by small company& just endorsed by Akshay kumar.I think they must have changed the name& came up with the donation thing,as soon as pubg got banned,and got their PR guys to contact Akshay Kumar.😂#PUBGBANNED #FAUG#pubgbannedinindia #Fau_G pic.twitter.com/3vwjwzPojc
— Zafar (@zafar_1qbal) September 4, 2020
Akshay Kumar to all the #PUBG player now#FAUG pic.twitter.com/pwjwt9BW0Q
— Abhishek Choubey (@ChoubeyJee_Kol) September 4, 2020
Aatmanirbharta Dikhai Ja Rahi Hai 😂
This thumbnail is enough to hurt many
What is this @akshaykumar Sir 😢
We're Very Disappointed 😥#FAUGGame #FAUG #AkshayKumar pic.twitter.com/nzm7nOSrTa
— Abhishek #StayHomeStaySafe ❁ (@the_avhishek) September 5, 2020
After Akshay Kumar's #FAUG ! Now Salman Bhoi Is All Set To Launch His Game #Driver-G
More Details Awaited !! pic.twitter.com/bOF9qKorfi
— 𝐘𝐚𝐬𝐡 (@SRKianYash_) September 5, 2020
सम्भव छ नेपालमा मोबाइल फोनको एसेम्बल ?